Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » Iiseti zejenereyitha ezintsha ezibhengezwe yiGenerac Mobile
IGenac Mobile, umenzi ophambili weenqaba zokukhanya, iijenereyitha, izifudumezi, iimpompo kunye nezisombululo zokucinezela uthuli, namhlanje ubhengeze ukwaziswa kweeyunithi ezimbini ezinkulu zedizili- i-MDE330 kunye ne-MDE570 iijenereyitha zeselfowuni, ezijolise ekunikezeleni lula ukusebenza kunye nolondolozo. . Oomatshini abalungele ukurenta bafaka iingcango ezivulekileyo ezivulekileyo zokunyusa ukusebenza ngokuvumela itekhnoloji ukuba ifikelele ngokulula kuzo zonke iindawo zonikezelo lweenkonzo. Uyilo lwensimbi erhabaxa kunye nolwakhiwo luvumela ukusebenza kwezicelo ezahlukeneyo, ngaphandle kwemozulu.
I-MDE330 ine-9.3L ye-Perkins Tier 4 ye-injini eqinisekisiweyo yokugqibela, ngelixa i-MDE570 isebenzisa i-18.1L Perkins Tier 4 injini eqinisekisiweyo yokugqibela. Zombini ezi njini zibonelela ngetekhnoloji yolawulo lomthwalo ka-Perkins Exhaust Temperature Management (ETM), ishenxisa umba wokumanzana okumanzi ngexesha leemithwalo eziphantsi kwaye kungabikho mthwalo, ezinokuthi zenzeke ukuba umvelisi wedizili ungalinganiyo okanye ugqithiselwe umsebenzi. Iinjini kwiGenerac's MDE330 kunye ne-MDE570 ziyilelwe ukuthintela ukubekwa okumanzi ngokubeka iliso kunye nokulawula amaqondo obushushu eemoto kunye nokubonelela ngobushushu obongezelelekileyo, njengoko kufuneka.
"IGenac Mobile inikezela ngamandla anokuthenjwa ahamba apho ufuna khona, enika abathengi ubuchule kunye nolawulo lokwenza umsebenzi-nokuba uphi," utshilo u-Aaron LaCroix, umphathi weemveliso, iGenerac Mobile. "Ngobunjineli obuphambili kunye noyilo olonga ipetroli, iiyunithi zethu zivumela ixesha elongeziweyo kunye namathuba amade enkonzo ukuze uhlale emsebenzini ixesha elide, ungagalelwa mafutha ulondolozayo."
I-Generac's MDE330 kunye ne-MDE570 ziza kumgangatho weeyure ezingama-500 zeoyile kunye nexesha lokucoca ulwelo lokunciphisa ulondolozo kunye nokuhla kwexesha lokuhla. Umthamo omkhulu wezibaso kunye neetanki ze-DEF zivumela ixesha lokubaleka ubuncinci iiyure ezingama-25 ngaphambi kokuba ifuneke i-refueling, inyusa imbuyekezo kutyalo-mali.
Iimpawu ezikhethiweyo zibandakanya ukwanda kwamandla okuqala kweemoto, iikiti ezibandayo zemozulu kunye nokhetho lokongezwa kwamandla. Ukulungelelanisa okona kugqityiweyo, ezi yunithi zinokucwangciswa ukuba zingqinelane, zenze ukuba indlela yamandla ibe namandla.
Isilawuli sePowerZone® Pro Sync siza kumgangatho kuzo zombini iiyunithi, ukuvumela umsebenzisi ukuba abeke iliso kwindlela yokusebenza kunye nokwenza uxilongo kwiyunithi. Isilawuli sibekwe ngokufanelekileyo emva komatshini malunga neenyawo ezi-5, ii-intshi ezi-6 emhlabeni ukusuka kwinguqulelo yethayile yokufikelela ngokulula. Isilawuli sePowerZone® Pro Sync sibeka zonke izinto ezilawula oomatshini kunye nolwazi kwindawo enye, kwindawo ekulula ukuyisebenzisa ukubonisa umbala wescreen esibonisa iikhowudi zokuqonda kunye nolwazi oluncedo.
I-MDE330 entsha kunye ne-MDE570 ziya kufumaneka ngoku-odola kunye nokucaphula kwi-Q4 2021 kwaye ziya kufumaneka ngenqanawa kwi-Q2 2022.